भित्री सिढीहरू: आफ्नो शैली छान्नुहोस् | बेजिया
भित्री सीढीहरू: आफ्नो शैली छान्नुहोस्
मारिया vazquez | 22/11/2021 20:00 | सजावट को चलन
भित्री सिढीहरूले हामीलाई घरको भुइँहरू जोड्न मद्दत गर्दछ। यस व्यावहारिक पक्षलाई सन्तुष्ट पार्नुबाहेक, तिनीहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् व्यक्तित्व र शैली घरमा ल्याउन सक्रिय। र यो हो कि इनडोर सीढीहरूले ठूलो मात्रा ओगटेको छ र यदि हामी चाहन्छौं भने निश्चित ठाउँको नायक बन्न सक्छ।
तपाई आफ्नो घरको लागि कस्तो शैली चाहनुहुन्छ? तपाईको जवाफ जेसुकै भए पनि, तपाईलाई केहि सीढीहरू फेला पार्न गाह्रो हुने छैन जसले तपाईलाई यसलाई बढाउन मद्दत गर्दछ। र तिनीहरू अवस्थित छन् धेरै प्रकारका भित्री सीढीहरू र तिनीहरूको डिजाइनको सन्दर्भमा धेरै फरक। र यसमा हामी आज रोक्छौं, तपाइँलाई प्रत्येक शैलीको लागि फरक प्रस्तावहरू देखाउँदै।
4 आधुनिक, समकालीन
को मध्यम वा गाढा टोनमा काठको सीढीहरू काम गरिएको रेलिङको साथ उनीहरूले दशकौंदेखि घरहरूको केन्द्रीय बिन्दुको रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् र त्यसो गरिरहनेछन्। तिनीहरूको सामान्यतया गोलाकार आकारहरूले हामीलाई वर्षौं पछाडि लैजान जारी राख्नेछ, यद्यपि तिनीहरू हाल हल्का रङहरू र अधिक विवेकी रेलिङहरूसँग पुनर्निर्मित भइरहेका छन्।
तर काठको सिँढीहरू मात्र त्यो क्लासिक सौन्दर्यलाई बैठक कोठामा ल्याउन सक्षम छैनन्। एफ कोधातु रेलिङ संग सजाइएको पत्थर वा संगमरमर तिनीहरूले यसलाई कालोमा पनि गर्छन्, जुन एक अतिरिक्त परिष्कार प्रदान गर्दछ। र यो हो कि यी भित्री सीढीहरू अझै पनि हलवे र महल घरहरू र लक्जरी घरहरूको बैठक कोठाको केन्द्रीय तत्व बन्न मनपर्ने छन्।
न्यूयोर्क लफ्टले औद्योगिक शैलीलाई अर्को स्तरमा ल्यायो र त्यसपछि धेरैले आफ्नो घरमा औद्योगिक शैली तत्वहरू समावेश गर्न खोजेका छन्। धातु सीढीहरू तिनीहरू यसको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन्, दुवै वृद्ध धातु पानाहरू र धातु ग्रिडहरू तपाईंको डिजाइनको लागि उत्कृष्ट सहयोगीमा परिणत गर्दै।
धातु ग्रिड यो आज ती घरहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय स्रोत हो जसले औद्योगिक डिजाइन सीढीमा शर्त लगाउने निर्णय गर्दछ। र यद्यपि यो सामान्यतया यस उद्देश्यको लागि कालो ग्रिडमा शर्त छ, यो सेतो, नीलो, पहेंलो वा गुलाबीसँग हिम्मत गर्न बढ्दो सामान्य छ। यस विकल्पको बलियो बिन्दु यो हो कि यो नेत्रहीन रूपमा हल्का छ र प्रकाशलाई एक छेउबाट अर्कोतिर जान अनुमति दिन्छ, ती ठाउँहरूमा जहाँ प्राकृतिक प्रकाश मात्र एक तर्फबाट आउँदछ त्यहाँ ठूलो सहयोगी बन्न सक्छ।
कंक्रीट यो औद्योगिक शैलीसँग नजिकको अर्को सामग्री हो। यसले सीढीहरूमा ठूलो "एकता" प्रदान गर्दछ, त्यसैले हामी प्रायः यस सामग्रीमा धेरै हल्का धातु रेलिङहरूसँग जोडिएको चरणहरू फेला पार्छौं। यी प्रकारका सीढीहरू देहाती र समकालीन वातावरणहरूमा विशेष गरी राम्रो देखिन्छन् जसमा काठका तत्वहरू न्यानो प्रदान गर्न जिम्मेवार छन्।
यदि हामी एक minimalist शैली खोज्दै हुनुहुन्छ तैरिरहेको सीढीहरू तिनीहरू सधैं विचार गर्न विकल्प हुन्। यी सीढीहरूका पङ्क्तिहरू सामान्यतया तिनीहरूको एक छेउमा समर्थित हुन्छन्, जसले वजनहीनताको दृश्यात्मक रूपमा धेरै आकर्षक अनुभूति प्रदान गर्दछ जुन रेलिङको खराब छनोटले तोड्नु हुँदैन।
तिनीहरू न्यूनतम र अवान्त-गार्डे ठाउँहरू जडान गर्ने एक मात्र विकल्प होइनन् र यदि हामीसँग बच्चाहरू वा घरमा गतिशीलतामा कठिनाइ भएका मानिसहरू छन् भने सबैभन्दा सुरक्षित पनि होइन। जब पनि हामीले शर्त लगायौं सफा रेखाहरू र रंगहरू जसले कोठामा सीढीलाई एकीकृत गर्दछ हामी यो शैली संग संगत एक सौन्दर्य प्राप्त गर्नेछ।
हामीले अहिलेसम्म कुरा गरेका धेरै डिजाइनहरू यो मूल्याङ्कनमा पनि फिट हुन सक्छन्। र यो छ कि यसमा त्यहाँ भन्दा धेरै फरक सीढी को लागी कोठा छ तिनीहरूको आकार, अवधारणा वा रंगको लागि बाहिर खडा। भित्री सिढीहरू जसले आधुनिक, समकालीन र अवान्त-गार्डे ठाउँहरू सजाउँछन् जुन विरलै ध्यान नदिइन्छ।
यी सीढीहरूमा के समान छ? तीमध्ये अधिकांश विभिन्न सामाग्री संयोजन यसको डिजाइनमा: काठ र धातु, काठ र गिलास, ढु stone्गा र कंक्रीट ... सीढीहरू हुनु जुन या त वातावरणमा एकीकृत हुन्छ वा यससँग तोडिन्छ, बाँकी तत्वहरूबाट बाहिर खडा हुन्छ र ध्यान केन्द्रित हुन्छ।
घरको सजावटमा भित्री सिढीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तिनीहरू पहिलो तत्वहरू मध्ये एक हुन् जसले ध्यान आकर्षित गर्दछ र यसको लागि ठूलो सहयोगी बन्छन् व्यक्तित्व र शैली बढाउनुहोस् हाम्रो घर को।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » सजावट को चलन » भित्री सीढीहरू: आफ्नो शैली छान्नुहोस्
जाडोको लागि कालो र सेतो शैलीहरू